XAALADEENA NOLOLEED WAXAA ABUURAY FEKERKEENA. – Sumcadda Islaamka
XAALADEENA NOLOLEED WAXAA ABUURAY FEKERKEENA.
Xaaladdeenna nololeed waxaa abuuray sida aan u fikirayno
Haddii aannaan badalin sida aan u fikirayno, ma is baddalayso xaaladda adag ee aan ku sugannahay.
Xusuus: Waxaan is xusuusinaynaa sida aan maanta nahay- Soomaali- iyo guud ahaan Muslimiinta. Waxaan ku sugnnahay xaalad aan ka bakhtinay oo aan ka oommannahay wixii Alle nasiiyay. Waxaan ka oommannahay biyihii, waxaan ka gaajaysannahay badarkii, maxaa yeelay waxaan ka curyaansannahay caqligii adeegsan lahaa dhammaan nicmooyinka Alle oo dhan.
Taasi waxay keentay inaan u baahanno kuwa caqligooda adeegsanaya. Baryada iyo Qaxootinimadu waxay noo dhaantaa inaan ku sii noolaano waddan aan caqliga la adeegsanayn, oo rafaad iyo gaajo loogu bakhtiyay.
Aan is waydiino: Maxaa keenay in waddanka Yurub ugu yar, si fiican dadkiisu u noolyihiin, oo ay marti galinayaan dad kale oo bilaa’aadan ah, annaguna aan baahi iyo cudur ugu dhimanayno waddan aad u khayraad badan oo bad iyo birri leh, khayraad dabeeci ahna ka buuxaan? Farqiga annaga iyo kuwa aan u qaxayno u dhexeeya, waa adeegsiga caqliga iyo adeegsi la’aanta caqliga.
Haddii dadku awoodi waayaan inay naftooda daryeelaan oo haraadka, gaajada, cudurka iyo aqoon darada kala tacaali waayaan, suuragal matahay inay daryeelaan oo dhaqaaleeyaan Diinta Alle iyo Alle cibaadadiisa? Waa maya. Marka yaan waxba la isku daalin Diin iyo Alle, ee aan wax ka qabanno shaqadii la’inoodiray.
Maxaad orankartaa ummad ku doodaysa, ma garan karno sidii aan unnoolaan lahayn oo aan u heli lahayn waxa aan u baahannahay, laakiin waxaan garanaynaa oo daryeelaynaa oo u dhimanaynaa Diintii Alle iyo Cibaadada Alle. Tiisa daryeele ayaa tukale ku dara.
Taasi waa dood jirta; laakiin haddii aan fahmi waynay noloshaan adduunka oo aan ku noolnahay, awoowe yaasheenna aan ka dhaxalnay, sidee u garanaynaa danta Diinta iyo Alle?
Marka aan isticmaalno awoodda Alle ina siiyay ee garashada iyo caqliga ah markaas ayaan daryeeli karnaa Diinteenna iyo danteenna labadaba. Inta garashadaasi maqantahay, waxaan ahaanaynaa dad wareersan oo aan adduun iyo aakhiro midna ku fiicnayn.
Sidaas daraadeed, waxaan ugu baaqaynnaa walaalaha Soomaaliyeed inaysan ka xishoon, kana baqin inay caqligooda isticmaalaan oo su’aalo sax ah is waydiiyaan si ay jawaab sax ah u helaan.
Qofna yuusun isku daalin oo marmarsiinyo ka dhigan Diinta Islaamka iyo fahankeeda, maxaa yeelay waxaa maqan wixii lagu fahmi lahaa oo ah isticmaalka iyo adeegsiga caqliga. Marka caqliga laga cararo oo lala colloobo adeegsigiisa, Diin, dal iyo dad midna ma hagaagi karaan.
Marka u horaysa waa inaan aqbalno Allana uga shukrino nicmada garashada iyo adeegsiga garaadka wax kala sooca.
Maqnaanshaha garaadka adeegsigiisu waxay keentahay, in culumada Diinta la laayo, haweenka iyo caruurta suuqa lagu xasuuqo, haddana Janno Alle laga fisho. Waxay keentay, inaan dawladdu ka xishoon ceebna u qaadan laaluushka, beenta, tuugada, haddana ay doonayso inay dadka iyo dalka xukunto oo u sheegto waxa fiican iyo wax xun. Waxay keentay in Haweenka Soomaaliyeed laga shakiyo oo loo diido xuquuqdooda asaasiga ah, laguna ihaanaysto magaca Alle iyo Diinta.
Waxaas oo dhan waxaa looga bixi karaa in si caqli ku dhisan loo fikiro oo garshada la shaqo galiyo.
Shiikh C/raxman M. Jibriil.
MA SINA SAMAHA IYO XUMAHA
NABADDA IYO MUHIIMADDA ISLAAMKU SIIYAY